indawo enobubele - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAndreas
Yakhiwa ngo-1890 , le ndlu idwelisiweyo isembindini welali entle. Isakhiwo esihle kakhulu samagumbi okulala ayi-4 400 sq.m esineyadi engaphakathi kunye negadi eluhlaza.
Le ndlu inemigangatho emibini yakhiwe ngamatye amhlophe asekuhlaleni kunye nomhlaba opholileyo ehlotyeni nasebusika. Le ndlu ibikwintsapho yam izizukulwana ezininzi. Ukulungiswa kwayo kokuqala kwaqala ngo-1929 ngugogo wam, kutshanje yalungiswa kakuhle ngabanikazi bayo bangoku.
Ngenxa yezakhiwo zayo zesintu zayigcina le ndlu inemosaic yamatye eqhelekileyo, iisilingi zamaplanga eziphezulu, iindawo ezinkulu ezivulekileyo ezenza kubekho ukukhanya okwaneleyo kunye neendawo ezintle.
Umphantsi uquka iholo yokungena, igumbi lokuphumla, igumbi elinamagumbi amabini, indawo yokutyela, igumbi leTV kunye nesihlomelo esongezelelweyo/igumbi lokulala leendwendwe kunye negumbi lokuhlambela okwaziyo ukungena kulo xa usuka everandeni.
Umgangatho wokuqala unamagumbi okulala amabini aneebhalikhoni, iveranda, ikhitshi, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala elinebhalkhoni. Kwakhona ityeya ephezulu ye-idyllic ibonelela ngeendawo ezithi ndijonge zeentaba ezikude kunye nolwandle.
I-Instagram: @ placeofgrace_
Le ndlu ime kufutshane necawa ephambili yale lali. Ecaleni komnyango kukho ivenkile encinci yokutya kunye nesidlo sakusasa nesidlo sasemini. Ikude ngeemitha eziyi-100 kuphela yiMyuziyam entle yobugcisa benkcubeko, i-embroidery kunye ne-silversmithing. Iindawo zokutyela ezikufutshane neendawo zokutyela ezininzi onokukhetha kuzo kunye nabantu abaqaphelayo ukuba batyelele iindawo ezininzi zokwenza iwayini kunye neetaveni zemveli zasekuhlaleni zinokuba nomvuzo omkhulu.
Hi, i am Andreas,me and my wife are the current owners of Juniper retreat.
Myself i am a professional host, interior designer, a wood sculptor and a garden and nature enthusiast.
The house has been in my wife's family for generations, lovingly restored, much enjoyed in every occassion for our large family gatherings.
Our aim is our guests would enjoy the house as much as we, in harmony with all that the village and the beautiful surrounding nature has to offer
Myself i am a professional host, interior designer, a wood sculptor and a garden and nature enthusi…
Sisoloko sizamkela iindwendwe xa zifika naxa zihamba. Ngexesha lokuhlala kwakho sisoloko sikhona ukuze sikuncede ngayo nayiphi na inkcazelo efunekayo. Singakulungiselela ishedyuli ngezinto onokuzenza ezicetyiswayo namacebiso asekuhlaleni anokwenza ukuhlala kwakho kube yinto engalibalekiyo.
Sisoloko sizamkela iindwendwe xa zifika naxa zihamba. Ngexesha lokuhlala kwakho sisoloko sikhona ukuze sikuncede ngayo nayiphi na inkcazelo efunekayo. Singakulungiselela ishedyuli…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pano Lefkara